Walitti bu'insa Oromiyaa fi Somaalee: Cinaaksanitti 'namoonni 22 lubbuu dhaban' - BBC News Afaan Oromoo
Erga pireezindaantonni naannoo Oromiyaa fi Somaalee Dilbata dabre nagaan akka bu'u ni hojjenna jedhanii booda, Aanaa Cinaaksan qofa keessatti namoonni 22 ajjeefamuu isaanii, OBN gabaase.
Aanaa Cinaaksanitti bilbillee dhimma kana mirkaneeffachuuf yaalii gooneen, guyyoota sadan darban kana keessa namoonni 22 ajjeefamuu, 35 madaa'uu fi kana malees, manneen horsiisee bulaa 86 abiddaan barbadaa'uu mirkaneeffannee jirra.
Haleellaan kun humnoota liyyuu poolis jedhamuun beekaman, naannoo somaalee irraa as ce'aniin kan raawwatame ta'uusaa, OBN gabaasa isaa keessatti ereera.
Walitti bu'iinsa Oromiyaa fi Somaalee duuba maaltu jira?
Halellaan kunis hammaataa akka jiruufi lakkoofsi miidhamtootaas guyyaa guyyaan dabalaa akka jiru obbo Jamaal himaniiru.
Pireezidantoonni naannoolee lamaanii nagaafi tasgabbiin akka bu'uuf ni hojjenna haa jedhan malee, rakkoon kun ammas akkuma itti fufetti jira.
Gaazexessaan OBN dhimma kana aanaa cinaaksan irraa gabaase, mana reefu gubataa jiru fi namoota rasaasan dhaayaman haasofsiisee jira.
Goodayyaa suuraa Manneen 86 ol akka gubatanis gabaafameera
Manguddoon inni haasofsiise tokko ''Miidhaa nurra gahaa jiru kana, naannoon Oromiyaa yoo dadhabde, akka addunyaatti iyyuu barbaadna'' jechuun dubbatan.
Gaazexeessaan kun wayita achi turetti, sagalee rasaasaa dhagahuu isaa BBCtti himeera.
Kana malees, hojjattoonni buufataalee fayyaa hedduun sodaa lola kanaan kan ka'e, hojii dhiisanii baqachaa akka jiranii fi kanarraa kan ka'es, buufataaleen fayyaa sadi guutummaatti hojii dhaabuu isaanii odeeffanneerra.
Mootummaa naannoo Somaaletti bilbillee mirkaneeffachuuf yaaliin taasisne nuuf hin milkoofne.
Sababuma walitti bu'insa naannoo daangaa Oromiyaa fi Somaalee kanaan, hawaasni qe'ee isaaniirraa buqqaafaman kuma 55 ol akka ta'an gabaasneerra. Lammiilee kanneen gargaaruuf jecha, hawaasni biyya alaa fi keessa jiran qarshii walitti buusaa jiru.
Birriin miliyoonota kudhaniin lakkaa'amu sassaabamaa jiraachuu, miidiyaalee garagaraa irratti gabaafamaa jira.